Wax ka beddelka fikradaha ku saabsan B2B Suuqgeynta Mawduucyada (oo leh tirakoob) | Martech Zone
Beddelida fikradaha ku saabsan B2B Suuqgeynta Macluumaadka (oo leh Tirakoob)
Talaado, Agoosto 25, 2015 Talaado, Agoosto 25, 2015 Douglas Karr
Kooxda Dhaqaalayahannada waxay sameeyeen sahan dhammaystiran iyo falanqeyn ku saabsan dabeecadaha B2B waxayna soo saareen macluumaadkan natiijooyinka. Su'aal kasta, waxaa jira isbarbardhiga halyeeyada ganacsiga iyo jiilka xiga ee iibsadayaasha ganacsiga. Waa wax xiiso leh in la arko farqiga weyn ee u dhexeeya labada.
Dib u eegista nusqaamaha, waxaa jira kala duwanaansho soo jiidasho leh
Rugcadaagii ganacsiga ayaa helay warbixinnada cilmi baarista waxtar badan leh 35%!
Halyeeyada ganacsiga, ugu yaraan 26%, waxay ugu yaraan afar saacadood usbuucii ku qaataan inay wax fahmaan nuxurka ganacsiga.
Halyeeyada ganacsiga waxay u badan tahay inay helaan 25% whitepapers waxtar badan.
Rugcadaagii ganacsiga 23% ayay u badan tahay in lagu damiyo maadooyin u eg a iibinta.
Halyeeyada Ganacsiga waxay u badan tahay 22% inay doorbidaan waxyaabaha ku jira qaabka articles.
Laga yaabee inaysan layaab aheyn, dadka ganacsatada ah ee dhalinyarada ah waxay doorbidaan muuqaalka fiidiyowga (9%) marka loo eego celceliska halyeeyga ganacsiga. Tani waxay xitaa caddayn dheeraad ah u tahay safafka aan dhammaadka lahayn ee safarrada macaamiisha ee kuwa ka ganacsada waxyaabaha ay ku xujeeyaan.
Dhagsii si aad uhesho cabir buuxa
Tags: b2bnuxurka b2bhalyeeyada ganacsigaContent Suuqdhalinyarada ganacsatada ah
Micro-Moments iyo Safarada Macaamiisha
Boomtrain: Sirdoonka Mashiinka oo loo dhisay Suuqgeeyayaasha